सिटिजन्स बैंकको खुद नाफा बढ्यो, चैत मसान्तसम्ममा १ अर्ब ५४ करोड कमायो | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
बैशाख ८, २०७८ | आजको अर्थ
काठमाडौं - सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बैंकले १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो ।
विवरण अनुसार बैंकको खुद नाफासँगै प्रतिशेयर आम्दानीमा पनि सुधार देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष खुद नाफा ४१.६१ प्रतिशतले बढेको छ । खुद ब्याज आम्दानीसँगै फि कमिशन तथा डिस्काउण्ट आय र गैर सञ्चालन आम्दानी बढेपछि बैंकको खुद नाफा बढेको हो ।
समीक्षा अवधिसम्ममा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा २२७.५८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सोहि अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १३.१९ प्रतिशत बढेको छ भने खुद फि कमिशत तथा डिस्काउण्ट आय ३७.२१ प्रतिशत बढेको छ ।
खुद नाफासँगै बैंकको प्रतिशेयर आम्दानीमा पनि सुधार देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी १ रुपैयाँ ६६ पैसा बढेर १७ रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ । बैंकको नेटवर्थ १ रुपैयाँ १० पैसा बढेर १४६ रुपैयाँ ८७ पैसा पुगेको छ ।
साथै बैंकको चुक्ता पूँजी चैत मसान्तसम्ममा ११ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यको तुलनामा यो २८.५८ प्रतिशत बढेको हो । त्यसैगरी, बैंकको जगेडा कोष समीक्षा अवधिमा २६.३० प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ४६ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
रु रु जलविद्युत् सहित ८ कम्पनीको शेयरमुल्यमा उच्च् वृद्धि, कुनको कतिले वृद्धि ?
सेयर मार्केट जेठ २, २०७८
छ्याङ्दी हाइड्रोपावर सहित तीन कम्पनीको हकप्रद शेयर बिक्रीमा आउँदै